Intra_oral Scanner | LATHA DENTAL CLINIC
Latha Dental Clinic တွင် သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများအတွက် အဆင့်အတန်းမီ စက်ပစ္စည်း အသစ်များ ပြည်ပမှ မှာယူပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ ရောဂါများကို ကုသပေးလျှက်ရှိနေပါတယ် ။ ယခုလည်း သွှားတု သွှားအစွပ်များလုပ်ရန်ပုံစံ ယူဖို့ ယခင်ကလို ပုံစံခွက်ဖြင့် မလိုတော့ပဲ နောက်ဆုံးပေါ် Intra_oral scanner နဲ့ယူနိုင်သော ခေတ်မီ Scanner စက်အသစ်ကြီးရောက်ရှိလာသောကြောင့် ပိုမိုတိကျသော သွှားတု၊သွှားအစွပ်များကို လူနာများကို ကုသမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ပိုမိုတိကျပြီး ခေတ်မီသည့် ကုသမှုများဖြင့် သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ကုသလိုပါက Latha Dental Clinic ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ အမှတ် ၆၆၁ ၊ ပထမထပ် ၊လသာနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့် ၊ လသာမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများကိုကုသနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်း ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း 01-371414, 095101483 သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Intra_oral Scanner Treatment begins with taking x-ray and photographs for diagnostic purposes, followed by capturing the patient’s bite, teeth, and gums viaabite registration and polyvinyl siloxane impressions or an intra-oral digital scanner. The latter method has greatly increased in popularity in recent years as digital scanning technology has improved. The dentist/orthodontist completesawritten evaluation that includes diagnosis and treatment plan. Dental impressions are scanned in order to createadigital 3D representation of the teeth. Technicians move the teeth to the desired location with the program Treat, which creates the stages between the current and desired teeth positions. Anywhere from six to forty-eight aligners may be needed. Each aligner moves teeth .25 to .33 millimeters.
Previous Post Previous post: Latha Dental Clinic
Next Post Next post: ကလေးငယ်များ